Ihe niile ị ga-Maara Banyere Android Ngwaọrụ Manager
Android sistemụ-ewere dị ka a dị ịrịba ama a na nkà na ụzụ oge dị ka ọ na-enye ya ọrụ na ọtụtụ multiple atụmatụ na dị nnọọ otu otu ngwaọrụ. Na onye ọ bụla ọhụrụ mbipute nke Android ihe ọhụrụ na ẹkenam na ahịa. Na ya na-eweta Google nwekwara ewebata ihe ọzọ dị ịrịba ama, Android Ngwaọrụ Manager. Ya mere, imelite onwe unu banyere ihe ọmụma maka iji Android Ngwaọrụ Manager ebe a.
Part 1. Gịnị Bụ Android Ngwaọrụ Manager Part 2: otú melite Android Ngwaọrụ Manager Part 3: Olee otú Jiri Android Ngwaọrụ Manager Part 4: Android Ngwaọrụ Manager Alternatives Part 5: Ihe Android Ngwaọrụ Manager nwere ike ime na - Jikwaa Android Devices Nkebi nke 6 : MobileGo - Android Ngwaọrụ Manager maka PC
Part 1: Gịnị Bụ Android Ngwaọrụ Manager
Android Ngwaọrụ Manager bụ a ikenyeneke mbiet atụmatụ awa site Google aka Android nwe na-esonụ ụzọ:
* Soro ala ọnọdụ nke gị gam akporo ngwaọrụ na Google akaụntụ eji maka ijikwa ngwaọrụ gị.
* Mgbanaka gị gam akporo ngwaọrụ irrespective nke ya na ọnọdụ.
* Tọgharia mkpọchi ihuenyo paswọọdụ.
* Ehichapụ ihe niile data gị Android ngwaọrụ.
Nkebi nke 2: otú melite Android Ngwaọrụ Manager
Ịtọlite ​​Android njikwa ngwaọrụ bụghị a ike. Soro mfe nzọụkwụ n'okpuru, na i nwere ike ime ya onwe gị
1. Mee gị Android Ngwaọrụ Manager na Web
Nzọụkwụ 1. Turn na ọnọdụ ọrụ na gị android ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 2. Sign gị Google akaụntụ metụtara gị Android ngwaọrụ na-aga
Nzọụkwụ 3. gị gam akporo ngwaọrụ ga-akpaghị aka na-egosi.
2. Melite Android Ngwaọrụ Manager App
Nzọụkwụ 1. Download Google Android Ngwaọrụ Manager ngwa gị Android ngwaọrụ Google egwu na ngwa ahịa na ịwụnye.
Nzọụkwụ 2.A Welcome ákwà ga-apụta
Nzọụkwụ 3. Kpatụ Nabata na ị ga-adị njikere ịga on.
Part 3. Olee otú Jiri Android Ngwaọrụ Manager
Ozugbo ị furu efu gị gam akporo ngwaọrụ, i nwere ike iji Android Ngwaọrụ Manager ime esonụ ihe:
1. Ịchọta ngwaọrụ gị
Nzọụkwụ 1. Sign na gị Google akaụntụ on
Nzọụkwụ 2. Họrọ otu Android ngwaọrụ ị chọrọ soro.
Nzọụkwụ 3. The ọnọdụ nke ngwaọrụ ga-egosi na Google Maps.
2. Ring ngwaọrụ gị
N'okpuru nlereanya ọmụma, e nwere ụfọdụ nhọrọ ma họrọ mgbanaka, ọ na-amalite drumming na zuru olu, ọbụna ma ọ bụrụ na ọ na-ekpochi na atọrọ ka vaibret maka ọzọ 5 nkeji. Ị pụrụ ịchọ nke ahụ furu efu Android ngwaọrụ mfe na a nhọrọ ọ bụrụ na ị na-etinye ya ebe n'ụlọ gị ma ọ bụ na gị n'ebe ọrụ.
3. mkpọchi Android ngwaọrụ
Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ mkpọchi, a kwuo igbe ga-arịọ gị iji tọgharịa ọhụrụ paswọọdụ na ndị mmadụ ga-enwe ike ịnweta ngwaọrụ gị.
4. Ihichapu onwe gị data site na ngwaọrụ
Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ihichapu, a ọhụrụ mkparịta ụka igbe ga-arịọ gị iji gosi ihe nke ihicha ihe gị niile data.
Nkebi nke 4: Android Ngwaọrụ Manager Alternatives
Android Ngwaọrụ Manager bụghị onye ị chọrọ? Echegbula. E nwere ndị ọzọ uzo ozo maka ịchọta gị furu efu igwe!
Chọta My ekwentị Free 4.3 / 5
Cerberus Anti-Izu $ .2.99 Ngwugwu 4.5 / 5
Na-achọ Droid Free 4.4 / 5
1. Chọta My ekwentị
Nke a ngwa e mere maka ịchọta gị furu efu ekwentị ma ọ bụ ngwaọrụ. Ọ na-enye unu na-ala nke ịhụ ngwaọrụ gị na Google Map site n'igosi ya ugbu a na ọnọdụ. Ị nwere ike ịchọta ndị ọ zuru ma ọ bụ furu efu ekwentị ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ na ya enyemaka. Ihe i nwere ime bụ aha onwe gị na ngwa mgbe wụnye ya. Ozugbo ị na-enye nọmba ekwentị gị na ngwa ị nwere ike Chọpụta ya na ọnọdụ n'oge ọ bụla n'ebe ọ bụla! Otú ọ dị, a na ekwentị adịghị enye gị na ndị ọzọ na nhọrọ dị ka erasing gị onye data ma ọ bụ akpọchi ihuenyo ụkpụrụ.
Ọzọkwa, ị na-adịghị enwe ike melite a PIN ọhụrụ maka ngwaọrụ gị ma ọ bụ i nwere ike ịpị ngwaọrụ gị. Ma ngwaọrụ nwe nọgide na-emelite ya interface nke na-eme ka ọ dị mfe iji na kacha nta oriri batrị.
Download Chọta My ekwentị site Google Play Echekwala >>
Nke a revolutionary ngwa-ewere dị ka otu nke kasị mma uzo ozo nke Android Ngwaọrụ Manager. Ị nwere ike ịpị ekwentị gị site na mbịne ringer olu na full ma ọ bụ zipu a ederede ozi anya soro ala ngwaọrụ gị. Ọ na-enye gị kpọmkwem ọnọdụ nke ngwaọrụ gị site n'igosi ya na Google Maps site na-ejikọ ya na GPS na-achịkọta. Ọzọ egwu atụmatụ nke a na ngwa bụ na ọ na-enye ndị na Ịma Ọkwa nke ọ bụla mgbanwe nke SIM kaadị ma ọ bụ nọmba ekwentị mere na ha nwere ike Chọpụta ya ala mfe ọbụna mmadụ na-agbalị iji ya.
Ọzọkwa, ọ na-enye gị na paswọọdụ nchebe atụmatụ nke mere na ọ dịghị onye pụrụ ịgbanwe gị kọwaa ntọala ngwa na-enweghị kwesịrị ekwesị Nyocha. Na ọ na-awade a ndepụta nhọrọ na-agụnye ndị nwere ike iji ngwaọrụ gị site akụkụ. A na ngwa bụ otu nke kasị mma na ahịa dị ka ọ na-enye gị na nhọrọ wepụ data gị SD kaadị ma ọ bụ ọbụna site na ekwentị gị remotely.
Download Wheres My Droid si Google Play Store >>
Nke a App bụ ihe ọzọ ọzọ na ọtụtụ atụmatụ. Ị nwere ike ịchịkwa ya site na SMS ma ọ bụ site internet ihichapu ekwentị gị data ma ọ bụ gị SD kaadị si nchekwa. Ọ na-enye ndị na-atụmatụ maka kpochidoro ekwentị gị. Dị ka Wheres My Droid, ọ na-enye gị na oti mkpu nhọrọ, email ngosi mgbe SIM kaadị na-gbanwere.
Download Android Lost si Google Play Store >>
4. Cerberus Anti-Izu
A na ngwa na-enye gị nhọrọ soro ala ngwaọrụ gị. Ọ na-enye gị otu-izu ikpe na mgbe na a $2.99 kacha nta ugwo maka ndụ ojiji. Ọ na-enye gị nhọrọ nke ịkụ na oti mkpu ọbụna ma ọ bụrụ na ekwentị gị ka atọrọ na vibration mode. Dị ka abụọ ngwa n'elu, Cerberus nwekwara ike ihichapu gị data. Ọzọkwa, ị pụrụ igbachi ngwaọrụ gị na a koodu maka nwetakwuo nchebe. Ọzọ dị ịtụnanya atụmatụ nke a na ngwa bụ na ị nwere ike ịrụ ọrụ a na ngwa site SMS kwa, n'ihi ya, ọ na-adịghị achọ njikọ Ịntanetị.
Download Cerberus Anti-Izu si Google Play Store >>
5. Chọọ Droid
Na-achọ Droid na-enye gị na ọnọdụ nke ngwaọrụ gị na aga akụkọ ihe mere eme, gbanyere mkpọrọgwụ n'obi mkpu nhọrọ, si ehicha ekwentị gị ma ọ SD kaadị si data remotely na gbachiri ngwaọrụ gị mfe. Ị nwere ike ịchịkwa otutu ngwaọrụ na otu akaụntụ na ngwa a.
Download Chọọ Droid si Google Play Store >>
Part 5: Ihe Android Ngwaọrụ Manager nwere ike ime na - Jikwaa Android Devices
Android Ngwaọrụ Manager bụ ihe zuru ezu ngwugwu na a ọnụ ọgụgụ nke egwu atụmatụ. Otú ọ dị, ị na-apụghị ịrụ ụfọdụ atụmatụ:
1) Ị nwere ike adịghị jikwaa kọntaktị, ozi, videos, photos, ngwa, music.
2) Ị nwere ike ghara ndabere gị kọntaktị, ozi, videos, photos, ngwa, music.
3) Ị nwere ike izipu ozi na, ibubata iTunes playlist.
4) Ị nwere ike ịnweta ngwaọrụ gị ma ọ bụrụ na ọ na-gbanyụrụ ma ọ bụ ọ bụrụ na onye njikọ Ịntanetị adịghị.
Nkebi nke 6: MobileGo - Android Ngwaọrụ Manager maka PC
Wondershare MobileGo for Android Bụ ihe Android Ngwaọrụ Manager maka PC na-eme ihe Google Android Ngwaọrụ Manager ada ada mkpụmkpụ.
Mfe ndabere gị kọntaktị, ozi, kalenda, oku na ndekọ, videos, photos, egwú, na ngwa na-eji ngwa data.
Tinye, ihichapụ, bupu kọntaktị, ozi, videos, photos, ngwa, music nakwa dị ka akwụkwọ faịlụ.
Access google play ụlọ ahịa, YouTube na Baidu na weebụ ọ bụla ị na-amasị.
Tọghata ọdịyo na video.
Izipu ozi kpọmkwem site na kọmputa.
Mmekọrịta gị na iTunes playlist na gị Android ngwaọrụ
Cheta na: The Mac version adịghị ka ị ndabere media na ngwa data, akwụkwọ. Ọ na-adịghị akwado ohere Google Play ụlọ ahịa, YouTube, wdg
Ekiri Video banyere Wondershare MobileGo for Android
Top 7 iTunes ngwa ọdịnala n'ihi Android
Top 3 iTunes Alternative maka Android Software
Ndabere akporo ekwentị na Weghachi Mfe
Ndabere Data si akporo ekwentị na kọmputa
Atụmatụ na usoro on Android Photo ndabere
3 Ụzọ nkwado ndabere na mpaghara SMS na android ekwentị
Nyefee na Ndi ana-akpo / SMS si Blackberry ka Android
Olee otú Iji mgbọrọgwụ Samsung na Otu Click
8 Kasị-jụrụ ajụjụ banyere Samsung Kies ndabere
> Resource> Android> Ihe niile unu ga-amata banyere Android Ngwaọrụ Manager